एसइईपछि ‘ए लेभल’ : कहाँ र कसरी पढ्ने ? | NepalDut
ई. दिनेश भण्डारी पोखरा
प्रायः विद्यार्थीहरूको सोचाई एसइई पछि आफूले के पढ्ने र त्यो पढिसकिएपछि को अवसर र उच्च माध्यामिक तहका लागि पहिलाको पढाइले कतिको सहयोग पुर्याउँदछ भन्नेमा केन्द्रित हुने गर्दछ । एसइईको नतिजा आउनेक्रममा छ, त्यसपछि विद्यार्थीहरूले अब के पढ्ने ? कसो गर्ने ? के पढ्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने सोच्नतर्फ अहिल्यैबाट नै अग्रसर भइरहेका छन् ।
साधारणतया नेपालमा एसइई पछि १० जोड २ र ए लेभलका कक्षाहरू सञ्चालनमा छन् । यी २ कार्यक्रमहरूको विकल्पको रुपमा अर्को कार्यक्रम इन्टरनेशनल व्याकूलरेटको डिप्लोमा प्रोगाम हाल सञ्चालनमा छ । यद्यपि विद्यार्थीहरूका लागि आफ्नो रुची र चाहे अनुसारको विषय पढ्न पाउनु नै उनीहरूको अधिकार हो ।
बेलायतको विश्वप्रसिद्घ क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको जनरल सर्टिफिकेट अफ एजूकेशन (जिसिइ) कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित ए लेभल कार्यक्रम स्कूल, एसइई लेभल पासपछि प्लस टू इक्यूभ्यालेण्ट मान्यता बराबर, १६ देखि १८ बर्षसम्मका विद्यार्थीहरूका तयार पारिएको, उच्च माविको पाठ्यक्रममा आधारित रहेर नेपालमा संचालन भईरहेको बिषय हो । नेपालमा सर्वप्रथम काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ विद्यालयले सुरुआत गरेको ए लेभल, स्न २००२ देखि पोखरामा नोभेल एकेडेमीले संचालनमा ल्याएका हो ।
विश्वका १ सय ७० भन्दा बढी मुलुकहरूमा संचालित यो शिक्षा विश्वव्यापी, व्यवहारिक र अनुसन्धान मूलक छ । जसमा विद्यार्थीले के पढे भन्दा पनि के बुझे भन्नेमा जोड दिइन्छ । साधारणतया एसइईपछि २ वर्ष अध्ययन गर्नुपर्ने यस उच्च शिक्षालाई पहिलो वर्ष एएस (एडभान्स सब्सिडियरी) र दोस्रो वर्षलाई एटू लेभल भनिन्छ । यी २ वर्षको पढाइ पछि एउटा विद्यार्थीले आफ्नो ए लेभलको कोर्ष पूरा गदर्छ ।
यस पश्चात स्नातक अध्ययनका लागि विश्वका कुनै पनि विश्वविद्यालय र कलेजहरूका लागी ढोका खुल्दछ । नेपालको नागरिक ए लेभल अध्ययनको माध्यमबाट कुनै पनि देशको नागरिक हुन सक्दछ । विश्व प्रसिद्ध सबैले स्विकार गरेको पाठ्यक्रम र उत्कृष्ट विश्वविद्यालय नै ए लेभल यतिबेला चर्चामा छ ।
विश्वभरि एउटै समयमा रिजल्ट हुनु यसको विशेषता अन्तर्गत पर्दछ । प्रत्येक वर्ष मे, जून, अक्टोवर र नोभेम्वर महिनामा गरी २ समयमा संचालन हुने परीक्षा समाप्तिको २ महिनामा नै तोकिएको समयमा विद्यार्थीहरूले नतिजा हात पार्न सक्दछन् । परीक्षाका लागि पहिला नै विश्वविद्यालयले आफ्नो सिलेबस र परीक्षा पूर्व प्रकाशित समग्रीहरू अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइसकेको हुन्छ ।
साथै परीक्षा प्रणालीमामा आधारित रहेका थुप्रै अनलाइन विषय वस्तुहरू पनि इन्टरनेटमा पाइन्छन् । पूराना प्रश्नहरू साथै त्यसका लागि समाधान र नमूना प्रश्नोत्तरहरू अनलाइनमाफर्त पढन् सकिने हुँदा परीक्षाका लागि कति आत्तिनु नपर्ने र के पढ्ने भन्ने विद्यार्थीलाई भ्रम हुनेछैन ।
आफू के पढ्ने ? र के पढ्नमा आफूलाई आनन्द लाग्छ ? भने झैं विद्यार्थीहरूले ७० भन्दा बढी विषयहरूबाट छानेर आफूलाई मन परेको विषय पढ्न पाउनु ए लेभलको अर्को विशेषता हो । जसको कारण ए लेभलपछि विद्यार्थीहरूले के गर्ने ? भन्ने धेरै विकल्पहरू पाइन्छ । जस्तै ः उच्च माध्यामिक तहका लागि उत्तम विश्वविद्यालयको छनौट, रोजगारीको विभिन्न अवसरहरू, इन्टर्नसिपका अवसरहरू, विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकास, नयाँ सैद्धान्तिक पद्वतिको अनुभव र तत्पश्चात विभिन्न तथा अन्य अवसरहरूको सृजना इत्यादि ।
बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा संचालित यो शिक्षा नेपालको लागि परिक्षा संचालन, तालिम संचालन तथा अनुगमनको जिम्मा बिट्रिस काउन्सिलले पाएको छ । उक्त काउन्सिल अनुसार नै यो शिक्षा तथा परीक्षा पोखरामा नोभेल एकेडेमीले संचालन गरिरहेको छ । आफूले उच्च स्नातक तहलाई सहयोग पुग्ने गरी ४ वटा विषय पूरा गरेपछि यो शिक्षा पूरा भएको मानिन्छ ।
ए लेभल उत्तीर्ण पश्चात विद्यार्थीहरूले जुनसुकै विश्वविद्यालयमा पनि स्नातक तह भर्ना हुन पाउनेछन् । नोभेल एकेडेमीबाट ए लेभल पूरा गरी उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरू अहिले नेपाल र नेपाल बाहिरका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा छात्रवृत्ति प्राप्त गरी पढिरहेका र विभिन्न प्रख्यात राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूमा कार्यरत छन् ।
आधुनिक शैक्षिक पद्धतिको बढ्दो माग अनुसार विद्यार्थीको रोजाई, भविष्यप्रति महत्व र सान्दर्भिक शिक्षा पद्धति अनुरुप पढाई हुने ए लेभल कार्यक्रम विश्वव्यापी रुपमा चर्चित हुनुका साथै नेपालका विद्यार्थीहरूका लागि पनि उत्कृष्ट सावित भएको छ । तसर्थ विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षाका लागि ए लेभल उत्तम गन्तव्य बनिरहेको अवस्थामा त्यस गन्तव्यतर्फ अघि बढ्न नोभेल एकेडेमी अर्को एउटा माध्यम बनिरहेको छ ।
(लेखक भण्डारी नोभेल एकेडेमीमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)